Abesilisa ababengabathandi abesifazane, impumelelo ngemuva kokufa kukaLarsson | Izincwadi Zamanje
Abesilisa ababengabathandi abesifazane yinoveli yobugebengu ebhalwe nguStieg Larsson. Yashicilelwa ngo-2005, unyaka ngemuva kokushona kombhali, futhi iyincwadi yokuqala ochungechungeni Iminyaka Eyinkulungwane. Ukwethulwa kwayo kube yimpumelelo, njengoba ithengise izigidi zamakhophi ngesikhathi esifushane.
Indaba ingenisa UMikael Blomkvist (intatheli) y a ULisbet Salander (hacker), ngubani sizohlangana ukuxazulula icala elibandakanya umndeni obalulekile waseSweden. Le adventure yokuqala yajwayelwa i-cinema kabili; owokuqala, ngo-2009 ngenkampani yokukhiqiza eSweden. Kwathi ngo-2011, kwakhishwa inguqulo yaseMelika, lapho umlingisi uDaniel Craig nomlingisi uRooney Mara bakha khona umbhangqwana ohamba phambili.
1 Abesilisa ababengabathandi abesifazane
1.1.3 Izithandani zezinkanyezi
2.1 Umsebenzi usuqediwe
2.3 Ukushicilelwa ngemuva kokufa
Abesilisa ababengabathandi abesifazane Kuyinto a inoveli emnyama lokho kuqala i-trilogy yeminyaka. Umlando kwenzeka eSweden ngo-2002, futhi ingqikithi yawo igxile ekunyamalaleni kweHarriet Vanger eneminyaka engu-16, eyenzeka cishe eminyakeni engamashumi amane edlule. Ukuthola ukuthi kwenzekeni kulowo owake waba yintsha, abakwaVanger baxhumana nomphenyi kanye ne-hacker yekhompyutha uLisbet Salander nentatheli uMikael Blomkvist.
UMikael Blomkvist uyintatheli futhi umhleli wephephabhuku lezombangazwe laseSweden yeminyaka. Itulo limbeka esikhathini esibi ngemuva kokulahlekelwa yicala lokwehlisa isithunzi usomabhizinisi waseHans-Erik Wennerström. UBlomkvist uveze ukuthi lo somabhizinisi ukhohlakele, kepha inkantolo ithole ukuthi ubufakazi abuhlangani futhi yaphoqa intatheli ukuthi idonse izinyanga ezintathu ejele bese ikhokha inhlawulo ebizayo.
Kamuva, uHenrik Vanger —Umqondisi wangaphambili weVanger Corporation— xhumana noLisbet Salander ukuphenya iBlomkvist. Ngemuva kokulethwa kombiko, uVanger unquma ukuqasha intatheli ukuthi iphenye cishe ukunyamalala komshana wakhe uHarriet, kwenzeka eminyakeni engama-36 edlule. Ngokushintshanisa, unikeza ubufakazi obuqinile ngokumelene neWennerström; uqinisekile ngomvuzo, uBlomkvist wamukela.
Intatheli iya eHedeby Island, indawo ehlala iVanger nalapho kwenzeka khona ukunyamalala kweHarriet. Lapho uzohlangana noMartin —Umfowabo wentombazane elahlekile— namanye amalungu omndeni, kanye nabanye oxhumana nabo benkampani.
Maphakathi nophenyo, U-Blomkvist uzoxhaswa yi-Salander, ozokusiza ukuhlanganisa izingcezu ze-puzzle uze ufinyelele kumphumela omangazayo.
Ngonyaka we-1966 abakwaVanger babehlangene epulazini lomndeni elalikhona esiQhingini saseHedeby. Yimuphi umzuzu ojwayelekile wokuvumelana nokuphumula, ngokungazelelwe waphenduka into ecasulayo ngemuva kwe- Ukunyamalala kukaHarriet.
Izimo zazimangaza kakhulu, amathimba amaphoyisa asesha ngokungakhathali engatholi nolunye uhlobo lwemkhondo. Ngokuhamba kwesikhathi, icala livaliwe, abukho ubufakazi ukuqinisekisa ukufa kwakhe, ukuthumba noma ukweqa okungalindelekile.
Lapho sifika kulesi siqhingi, UMikael Blomkvist uxoxisana nezihlobo eziningana zikaHarriet, kufaka phakathi umama wakhe nomfowabo - ongumqondisi omusha wenkampani. Ngaphakathi kocwaningo lwakho thola izinkomba ebezinganakiwe: ezimbili izithombe yowesifazane osemusha esikoleni esiphakeme y idayari yakhe. Lesi sakamuva sasiqukethe amagama nezinombolo ezinhlanu, okuyimfihlakalo.
UPernilla (indodakazi kaBlomkvist) udlula kulesi siqhingi futhi usiza ukuxazulula le mpicabadala. Ukutholwa kuholela intatheli ekubulaweni kukanobhala wenkampani iVanger, eyenzeka ngo-1949. UBlomkvist waxhumana noHenrik, wamazisa ngesimo wacela noxhaso. ngubani othanda ukuthi ungumbulali obulalayo. Ngokushesha, usomabhizinisi uthatha isinqumo sokuthumela uLisbet Salander ukuba ayokwenza kabili noMikael futhi ngaleyo ndlela alisheshise icala.
Lapho uLisbet ejoyina uphenyo lukaBlomkvist, baqeda ukuxazulula imfihlakalo igxile kudayari kaHarriet. Lolo lwazi ibaholele ekutholeni amacala abesifazane abaningi abalahlekile; izinombolo zikhombise amavesi ebhayibheli lapho kuchazwa khona izijeziso ezinamandla zaphezulu. Lokhu kuqinisekisa umbono wentatheli: umbulali omkhulu lo.
Kamuva bathola isimo esibi: Martin Umfowabo kaHarriet— unesibopho sokudlwengula nokubulala abesifazane abaningi. Lapho ebhekene naye, uyawaqinisekisa la macala amabi futhi uyavuma ukuthi ufunde konke kuyise, uGodofredo Vanger. Yize ememezele zonke lezo zenzo ezimbi, uMartin uthi akazi lutho ngokwenzeka kudadewabo.
UGeoffrey Vanger —Inhloko yomndeni— kwaba nguye umbhali wezinto ezibonakalayo lamacala lapho i- imfumbe kudayari; Ngaphezu kwalokho, kuvela elinye icala elinyantisayo: wanukubeza izingane zakhe ezimbili ngokocansi kaningi.
UMartin, ngemuva kokutholakala, ekhoneni uLisbet noMikael ukubabulala, kodwa bona bayazuza phunyuka. Ukusuka lapho baqala ukuxhuma amachashazi bese kutholwa okutholakalayo okuvumela ukuthi icala lixazululwe, kutholakale ukuthi uHarriet ukuphi.
UKarl Stig-Erland Larsson bekuyi Umbhali waseSweden nentatheli wazalwa ngo-Agasti 15 kusukela ngo-1954 edolobheni lase I-Skellefteå. Abazali bakhe - uVivianne Boström no-Erland Larsson - babebancane kakhulu futhi bengenazo izinsiza ngesikhathi bemkhulelwa; ngenxa yalokhu, UStieg wakhuliswa ngugogo nomkhulu wakhe kuleli.
Lapho eneminyaka engu-9 ubudala, umkhulu wakhe wadlula emhlabeni, okwamenza wabuya nabazali bakhe e-Umeå. Eminyakeni emithathu kamuva, wathola umshini wokubhala futhi wazinikela ekubhaleni njalo ebusuku, kusukela esemncane kakhulu wahlushwa ukuqwasha. Izihlobo zakhe zithinteke ngomsindo wale divayisi futhi zamthumela egumbini elingaphansi; Lesi simo esingathandeki senza uStieg wanquma ukuzimela.
Yize ungenazo iziqu zaseyunivesithi, UStieg usebenze iminyaka engama-22 ilandelana njengomdwebi wemidwebo enkampanini ephathelene nezindaba iTidningarnas Telegrambyrå (TT). Futhi Wayeyisishoshovu sezepolitiki futhi wahola imibhikisho eminingi elwa neMpi yaseVietnam, ubandlululo kanye nelungelo eleqile. Ngenxa yalokhu, wahlangana no-Eva Gabrielsson, owayengumlingani wakhe iminyaka engaphezu kwengu-30.
Ngo 1995, ibiyingxenye yabadali be- Isisekelo se-Expo, isungulwe ukuze iphenye futhi ibhale phansi izenzo zobandlululo kanye nemihlahlandlela elwa nentando yeningi yomphakathi. Eminyakeni emine kamuva uqondise lo magazini Expo, lapho wayesebenza kanzima eyintatheli. Yize kwakunzima ukuthi agcine umagazini usebenza, wagcina uvaliwe ngoba awutholanga ukwesekwa okudingekayo.
Ukhiqize izincwadi eziningana ngokususelwa kwimibuzo yezintatheli ngokuba khona kwamaNazi ezweni laseSweden kanye nokuxhumana nohulumeni wamanje. Ngenxa yalokhu nokuba khona kwabo okusebenzayo emibhikishweni, wasongelwa ngokufa kaningana. Lesi bekuyisinye sezizathu ezinkulu zokuthi kungani egweme ukushada no-Eva, ukuvikela ubuqotho bakhe.
UStieg Larsson washona eStockholm ngoNovemba 9, 2004 ngenxa yesifo senhliziyo. Kucatshangwa ukuthi lokhu kwakushukunyiswa iqiniso lokuthi umbhali waseSweden wayebhema iketanga, isikhova sasebusuku nomthandi wokudla okungenamsoco.
Ukushicilelwa ngemuva kokufa
Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokufa kwakhe okungalindelekile, umbhali wayeqedile ingxenye yesithathu ye-trilogy yeminyaka. Ngaleso sikhathi umhleli wayo wayesebenza kwivolumu yokuqala ebizwa Abesilisa ababengabathandi abesifazane. Le ncwadi yanyatheliswa ngonyaka ngemuva kokufa kwakhe futhi yaba yimpumelelo enkulu. Umshicileli uqinisekisa ukuthi leli saga selithengise amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-75.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli emnyama » Abesilisa ababengabathandi abesifazane
Inhliziyo engihlala nayo